Mail evela pa parlour engento kule theyibhile ukuze ukhethe
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Mail evela pa parlour engento kule theyibhile ukuze ukhethe
Wena ke, xa ishishini e-mail, elibe pa, okanye isiqulatho efanayo ngalo lonke ixesha, mna ndicinga ukuba ingaba ezininzi ufumana umyalezo ezixhamla ukuba akukho iluncedo kakhulu. Kwi pa parlour, ethetha wena ukuba kutheni iposi, enyanisweni, isizathu ephambili kukutsala abathengi injongo, kungekhona umyalelo imeyile lokuwina abathengi. Kaloku, nkqu icala ebinikelwe, ukuze bambambise injongo pa parlour, i-imeyile engenamsebenzi Ndiyathemba wakube ulahle uyazi lo mkhuba.
kwishishini e-mail enjalo zegumbi pa, kukho ezinye iipateni.
eposini ukuxelela umoya ekulweni ukuba sicinywa, esiyikhuphayo onyanisekileyo namhlanje, kuba le email ngenjongo kuphela ngoka abathengi yokusebenza Injongo imeyile, wokugqibela ngenjongo isaziso siganeko. Kule, kukho imeyile Ayisalungele nto kakhulu yaze.
Kuyinto ukusebenza ejoliswe email lwesibini kuphela abathengi ekujongwe ngoka. Kwi e-mail mthamo, Ukuthetha kusoloko xelela xa badla ukufikelela, isimo emini kunye ngokuhlwa. Phakathi emails ezininzi zifike e-mail ngosuku, ukuze bafunde kakhulu, nguye sasemini sentsimbi. Ukuba akukho kusasa
lo msebenzi, kuba akukho kudla thumela, oko akuthethi kutshintsha kusasa nayo e-mail kunye nesiqulatho. Thina imeyili yayijoliswe ngokupheleleyo kuloo msebenzi kuphela.
kunye busuku i-imeyile, kodwa ukuba unalo ishishini oluqhelekileyo phantse iziphumo kunye iposi kusasa. Ukuze aphumelele ukuthanda atyelele kwi abathengi ngokuhlwa, kuya kuba ngeposi ukuxhokonxa utyelelo kwi ulwazi lomcimbi, yaye anjengala imini.
ngaphandle umcimbi omkhulu, kulungile ngaphandle ebuka kakhulu. Noko ke, ngokuhlwa e-mail yosuku iye yabamba isiganeko esikhulu, ngokuba kukho ityala apho ulwazi ekhethekileyo olunoluncedo kwi, nceda uzame ukukhangela.
umzekelo, izaziso, njl isaziso ranking kunye nexesha umahluko phakathi siyindawo evulekile izaziso nokuvumela indlela yokwaluka ndlela, nibe into. Ukongeza, i-imeyile engento ukuya e-mail elandelayo isebenza kuphela injongo, iziganeko It is a imeyili nokubheja isaziso.
ngokwaneleyo ukuba iindlela umcimbi omkhulu, oko kuthunyelwa rhoqo, kodwa ke oko akuthethi ukutshintsha umxholo amaninzi lonke ixesha. Xa ndifunda, loo nto idla lwenziwe imixholo ye email ekhuselekileyo ngaphandle kokufunda emva.
ulwazi olubalulekileyo, ngokufuthi kungena ubusuku email imini phambi kokuba siganeko, ayiloncedo le e-mail kakhulu ngexesha ushishino oluqhelekileyo. Ethetha nemisebenzi ye-imeyile enjalo luyalambatha, kusasa okanye ukutshintsha i-imeyile kunye nomxholo, zama reference kuba kuza uthumele i-imeyile kusasa njengoko kwakhona.
kuba nako ukufikelela imeyile imeyili yonke imihla, ube elinga ukuyekisa uthumelo kwaye babone kuphela imeyile engenamsebenzi. Eposini wayinikela yonke imihla, yaye xa ifikelela mail okanye ebalulekileyo, wena Xa ufunda le ndawo kufuneka kubonakala imixholo baqhubeka ukusetyenziswa kwenye encomeka kakhulu.